तरकारी खादाँ नुन चर्को खाने बानी छ ? ज्यादा नुन चर्को खानाले बढ्नसक्छ यस्तो समस्या:: Naya Nepal
तरकारी खादाँ नुन चर्को खाने बानी छ ? ज्यादा नुन चर्को खानाले बढ्नसक्छ यस्तो समस्या
काठमाडौँ । हाम्रो शरीरका लागि नुन अत्यावश्यक खाद्यपदार्थ हो । यसले शरीरमा सोडियमको मात्रा कायम राख्छ । मांसपेशी, तन्त्रिका, तरल पदार्थ आदिलाई सन्तुलनमा राख्न पनि नुनमा पाइने तत्वले विशेष भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । तर, अत्यधिक नुन खाएमा त्यसले शरीरमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
-नुनको बढी सेवनले मस्तिष्क, धमनी र मुटुमा बढी असर गर्छ । शरीरका रसायनमा असन्तुलन आई मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
-विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले प्रत्येक दिन ५ ग्रामभन्दा बढी नुन सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । तर, दक्षिण अफ्रिकीहरू एक दिनमा ८ दशमलव ५ ग्राम नुन खाने गर्छन् । जुन पक्षाघात (स्ट्रोक) र हृदयाघातको कारण बनिरहेको छ ।
-वयस्क मानिसमा आवश्यकभन्दा बढी सोडियम हृदयरोगको कारक बन्ने गर्छ ।
-उच्च सोडियमयुक्त खाना, खासगरी प्रशोधित खाद्यपदार्थले शरीरमा आवश्यकताभन्दा बढी पानीको मात्रा कायम गर्छ । जसले गर्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्छ ।
भुलेर पनि नफ्याक्नुहोस् चौलानी, बहुगुणी छन् यसका फाइदा
काठमाडौँ । चौलानीलाई मानिसहरू बेकार कुरा ठानेर फ्याँकिदिन्छन् तर स्वास्थ्यका लागि यो रामवाण हो ।
चौलानीमा सबै आवश्यक पोषक तत्त्वहरू भरपूर हुन्छन् । यसको सेवनले तौल घटाउन सहयोग गर्छ अनि रक्तचाप पनि नियन्त्रणमा राख्छ ।
यहाँ हामी चौलानीका केही फाइदाका बारेमा कुरा गर्नेछौं ।
चौलानी पिउँदा मेटाबोलिजम बढ्छ । यसमा फाइबर भरपूर हुनाले भोक पनि नियन्त्रणमा रहन्छ जसले गर्दा तौल घटाउन सहज हुन्छ ।
दिनदिनै चौलानी पिउँदा पेटका असल ब्याक्टेरियाहरू सक्रिय हुन्छन् । तिनले पाचन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउँछन् । अझ चौलानीमा कागतीपानी मिसाउँदा कब्जियतको समस्या भाग्छ ।
चामलमा कार्बोहाइड्रेट भरपूर हुनाले चौलानी पिउँदा शरीरमा दिनभरि ऊर्जा रहन्छ । बिहान एक गिलास चौलानी अवश्य पिउनुस् । त्यसमा अलिकति मह राखेर पिउँदा झनै राम्रो ।
भाइरल इन्फेक्सन वा ज्वरो आउँदा एक गिलास चौलानीमा मरिच राखेर पिउनुस् । छिटो ठीक हुनुहुनेछ ।
शरीरमा पानीको कमी हुन दिँदैन
चौलानीले शरीरलाई सबै आवश्यक पोषक पदार्थ दिन्छ र पानीको कमी पनि हुन दिँदैन । त्यसमा दूधको तर मिसाएर खाए हुन्छ ।
उक्त रक्तचापको समस्या छ भने दिनदिनै एक गिलास चौलानी पिउनुस् । त्यसमा भएको सोडियम भएकाले उच्च रक्तचाप र हाइपरटेन्सनमा फाइदा गर्छ ।
आधा गिलास चौलानी र आधा गिलास दूध मिसाएर पिउँदा हाड बलियो हुन्छ । यसरी पिइरहँदा बुढेसकालमा जोर्नी दुख्ने समस्या हुँदैन ।
दिनदिनै चौलानी पिउँदा छाला चम्किलो हुन्छ । चौलानीले अनुहार धोए पनि हुन्छ । यसले पिम्पल, चाउरी र आँखामुनि कालो जस्ता समस्या पनि भगाउँछ ।
चौलानी पिउँदा वा त्यसले कपाल नुहाउँदा कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । यसले तालुलाई सबै पोषक तत्त्व दिलाउने हुँदा कपालको जरा बलियो हुन्छ ।